Igumbi elinye (le 2pax okanye ukuziphekela ISIDLO) -wall FAN
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguDarl
Indlu ikwindawo ezolileyo. Eli gumbi linokuthatha ibhedi enye kuphela. Nangona kunjalo, omnye umatrasi unokubekelwa omnye umntu okwindawo ekude yegumbi ukuze abonelele iindwendwe ezijonge indawo efikelelekayo kwaye kulungile ukusebenzisa ifeni yombane enefestile evuleke kancinci yomoya othile wasebusuku. Oku akulunganga kwabo baqhele ukwenza i-aircon ingakumbi emva kwexesha lasekuseni nasemva kwemini. Isidlo sakusasa sasimahla sondwendwe olunye oluya kupheka lodwa. Nceda ujonge Ezinye izinto ekufuneka uziqaphele kwimenyu.
Uya kuhlala kwindawo yekhaya kunye nabamelwane abahlala ngokuzolileyo kwisahlulwana esigadiweyo.
Le ndlu yathengwa ngokukhawuleza ukuze abazali bomnini baquke usapho olwandisiweyo olwafumana intlekele eyothusayo ekugqibeleni. Iintlekele zenzeka kanye okanye kabini ngonyaka kwaye abanini kunye namanye amalungu osapho baya kutyelela indlu ngexesha leholide ngaloo ndlela beshiya indlu ishiywe iinyanga ezili-10 okanye njalo ngonyaka. Abanini ke ngoko bagqibe kwelokuba emva kweminyaka emi-2 befunyenwe ukuba le ndlu iqeshiselwe kungekuphela nje ingeniso eyongezelelweyo kodwa ibe nabantu abahlala kuyo. Ukuhonjiswa okongeziweyo kunye nophuculo/ugcino lwenziwa ngoku kwaye emva koko.
Umntu onxibelelana naye udla ngokufumaneka kwindlu yolwandiso nanini na kukho iindwendwe endlwini.
Sinciphisa ukubhukisha kwethu ukuze kubonakale ngathi sibhukishwe ngokupheleleyo emva kweenyanga ezintathu (3) kodwa mhlawumbi akunjalo. Sithumelele nje umbuzo kuba sifuna ukuyenza ikhululeke kuzo zonke iindwendwe zethu ezizayo ngaloo ndlela siqinisekisa ukuba iindwendwe zethu kwiinyanga ezintathu (3) ezizayo zihoywe kakuhle. Nceda usinyamezele.
Sinendawo ezolileyo enemizi engama-40 kuphela kulwahlulo.
Umbuki zindwendwe ngu- Darl
Amalungu osapho aya kufumaneka anokuqhagamshelwana naye kwiinkcukacha zoqhagamshelwano ezinikiweyo ngexesha lokuhlala kweendwendwe nangona ngenxa yobhubhane okhoyo, aziyi kuhlangatyezwana nazo ngokobuqu, kangangoko kunokwenzeka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Butuan City